Dargaggoonni barsiifata hamaarraa baraaramuu qabu
Misoomni biyya tokko keessatti mirkanaa'e kan jedhamu jiruufi jireenyi ummata biyyattii jijjiramuun tajaajila hawaas-dinagdeerraa walqixa fayyadamuunsasaanii yoo mirkanaa'eedha.
Misooma mirkaneessuuf ummanni biyyattii ilaalcha, “Dhimmi misoomaa dhimma jiraachuufi jiraachuu dhabuuti” jedhu qabatee kutannoofi ejjennoodhaan yoo hojii keessa galee qofa. Adeemsa misoomaaf taasifamu keessatti ummanni dhimmicha amantaa guutuun fudhatee ilaalcha ofiisaa gochuu yoo baate milkaa'uu hindanda'u.
Hawaasni misoomaan badhaadhe uumamuu kan danda'us ilaalcha misoomawaa irratti walta'insi biyyaalessaa yoo uumame, akkasumas eegumsaafi kabaja yoo argate qofa.
Mootummaan, bu'uurri ilaalcha misoomawaa ummataa hundee akka gudhatuuf ciminaan hojjechuu qaba. Olaantummaa ilaalcha misoomawaa uumuuf ammoo shoora olaanaa kan taphatu sochiilee misoomaa milkaa'ina qabuudha.
Gama Itoophiyaatti yoo deebines bu'uura misooma biyyaatiif dhaloonni har'aa jechuun dargaggoonni ga'ee olaanaa taphatu. Dhaloonni kun abdii boru akka ta'uuf qaamoleen mootummaa sadarkaa sadarkaan jiraniifi hawaasni marti eegumsa gochuun qaba.
Biiroon Dargaggootaafi Ispoortii Bulchinsa Magaalaa Finfinneefi waldaafi liigiin dargaggoota magaalichaa walta'insaan hubannoo dargaggootaa gabbisuuf torbe darbe keessa guyyoota sadiif Wiirtuu Ispoortii Jaanmeedaatti marii taasiseera.
Waltajjii marii kanarratti aanaalee Magaalaa Finfinnee 116 keessaa dargaggoonni kumaa shanii ol koorniyaa lameeniinuu hirmaataniiru.
Ittigaafatamaan Biiroo Dargaggootaafi Ispoortii Finfinnee, Obbo Nigaatuu Daanyaachoo waltajjiicharratti dargaggootaaf qajeelcha hojii kan kennan yoo ta'u, biyya takkaaf bu'uurri misoomaa ummata ishee ta'uu ibsaniiru.
Misooma har'aa kanas kan dhaloota har'aatti dabarsanii kennan abbootiifi obbolaan keenya naamusa gaariidhaan wantoota hawaasa miidhurraa fagaachuudhaani. Kana males, dhibeewwan 'HIV/AIDS', barsiifata boodatti hafaafi araada adda addaarraa fagaachuudhaan misooma biyyattii keessatti qoodasaanii bahachuu akka qaban gorsaniiru.
Dargaggoota magaalichaatiif bakka baratanitti, hojjetaniifi jiraatan maratti hubannoo kennuudhaan hojii dadammaqinsaan hojjechuun gahee hundaatii jedhu.
Biiroonsaanii Ministeeraa Eegumsa Fayyaa Federaalaafi Biiroo Fayyaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee wajjin sagantaalee addaddaa qopheessuudhaan, qorannoon dhiigaa akka taasifamuufi hawaasnis dhukkubicharraa akka of eegu taasisuusaati kan addeessan.
Misooma biyyaa keenyaa si'eessuuf lubbuu dargaggootaa dhukkuboota daddarbaniifi kan biroorraa baraaruu qabna kan jedhan Obbo Nigaatuun, hawaasni dhimma kanarratti duula taasisuu akka qabu yaadachiisu.
Shamaree Yeshimabeet Abaatee barattuu Kolleejjii Teknikiifi Ogummaa Inxooxoo kan waggaa sadaffaati. Hubannoo qabdu akka ibsitetti, dargaggoonni dhukkuba bara kanaan qofa osoo hinta'iin dhibeewwan biroorraa akka of eegan dadammaqsuun murteessaadha.
Kunimmoo qaama tokko qofaan kan galma gahu osoo hintaane, qindoomina mootummaa, dhaabilee fayyaa, maatiiwwan isaanii, manneen barnootaafi hawaasni maraan galma gahuu danda'aa jetti.
Dargaggeessa umurii waggaa 17fi barataa kutaa saddeetii kan ta'e Biruuk Takkaalliny gamasaatiin akka ibsetti, dhukkuboota daddarbaniifi araada addaddaarraa of baraaruun barbaachisaadha.
Rakkoon kun baldhinaan kan manneen barnootaa keessatti kan jedhu dargaggoon kun, mooraawwan manneen barnootaa keessatti giroosariiwwaniifi suuqiiwwan jimaafi shishaan itti qaamamuufi xuuxamu waan jiraniif dargaggoonni amala gadheef akkuma salphaatti saaxilamuu kan danda'an ta'uu addeessa. Kana furuuf ammoo maatiinis ta'e hawaasni hordoffiifi to'annoo walirraa hincitne gochuu qabuu jedha.
Kana waliinis maatiin, hoggansi manneen barnootaafi hawaasni naannoo haala itti fufiinsa qabuun dargaggoota rakkoo keessa seenanii jiran baraaruu akka qaban eereera.
Walumaagalatti, dargaggootni misooma biyyaa keessatti gahee olaanaa waan qabaniif, qaamoleen sadarkaa hundarra jiran xiyyeeffannootiin isaanirratti hojjechuun barbaachisaadha. Hawaasni martis dargaggoota humna omishaa ta'anirratti invasti gochuun filannoo hinqabu.
Torban kana/This_Week 4316
Guyyaa mara/All_Days 1641911